Vavaka fitahiana amin'ny andro. ? Raiso ny fitahiana isan-karazany
Vavaka fisaorana tokony ho tsy an-kiato ao am-bavantsika izany satria miaraka aminy afaka mametraka toy ny fefy manodidina antsika izay misy zavatra tsara tafiditra amin'izany.
Ny tenin'Andrimanitra dia manazava amintsika fa ny fitahian'Andriamanitra dia tsy manampy alahelo ary izany no fanalahidy hamaritana hoe inona avy ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra ary tsia. Amin'izany toe-javatra izany, amin'ny alalan'ny fanaovana ireny vavaka fitahiany ireny dia afaka misaotra, mitahy ny tenantsika na olona iray hafa ary mahatsapa ny herin 'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika.
1 Vavaka fisaorana
2 1) Vavaka hahazoana ny tso-drano isan-karazany
3 2) Vavaka fitahiana ny andro
4 3) Vavaky ny fitahian'Andriamanitra
5 4) Vavaka hisaorana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana rehetra
5.1 Tena mahery ve ny vavaka fitahiana ity?
Tombontsoa ny tso-po tadiavintsika rehetra na tiantsika ho azontsika amin'ny fotoana rehetra.
Matetika isika no mandray azy ireo irery ary na dia tsy tsapantsika akory aza indraindray ary tsy maintsy mangataka na miady ho azy ireo isika.Tamin'izany, ny vavaka fitahiana dia lasa fitaovam-piadiana mahery azontsika ampiasaina amin'ny fotoana rehetra.
1) Vavaka hahazoana ny tso-drano isan-karazany
Mangataka anao aho hitahy ahy,
tahio daholo izay tian'ny tanako anio,
Misaora ny asako ary ampio aho mba hahavita azy tsara, fa tsy hanao fahadisoana.
Misaora ny mpiara-miasa amiko rehetra;
Ray ô, tahio ny hevitro sy ny fahatsapako tsirairay avy,
mba tsy hieritreretana na hahatsiaro tena ho ratsy,
ka izay rehetra ato amiko dia fitiavana ihany;
tahio ny teniko tsirairay,
Tsy milaza zavatra izay azoko atao rehefa avy eo manenina.
Misaora isan-tsegondra amin'ny fiainako,
ka miaraka aminy aho dia afaka mandray ny sarinao sy ny teninao amin'ireo izay mila izany.
Misaora ahy, Tompo, mba ho tahaka ny endrinao sy ny tarehinao aho,
hitondra zavatra tsara ho an'ny olona rehetra
izay manodidina ahy ka dia voatahy anao izy rehetra.
Mangataka aminao aho mba hitso-drano anao ny olona rehetra ao am-poko,
ny Fanahy Masina sy ny Virjiny;
Fitahiana amin'ny fitiavana, ny fahasalamana, ny vola, ny fianakaviana, asa, asa aman-draharaha, ho an'ny mpianakavy, ho an'ny ankizy ary na handao ny tranontsika isan'andro aza, ilaina ny fitahiana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika.
Zava-dehibe ny fahafantarantsika ny fomba hananganana fianakaviana na fitsipika manokana hanaovana izany vavaka atao isan'andro izany na amin'ny indray mandeha isan-kerinandro. Azontsika atao koa ny mampianatra izany amin'ny zanatsika sy ny fianakaviantsika ary amin'ny fomba toy izany dia manamafy orina ny finoan'ny fianakaviana ary koa mandany fotoana tsara miaraka aminy.
2) Vavaka fitahiana ny andro
Ray tsy mendrika
Misaotra anao aho tamin'ity andro vaovao ity,
hatramin'ny nahateraky ny masoandro sy ny fifohazako ary ny diako ho azy,
Manana ny ho akaiky kokoa anao aho, ho mpizara tsara kokoa noho ny omaly.
Misaotra anao aho noho ny fianakaviana napetranao ahy,
ho an'ny namako izay mitarika ahy hahasoa
ary izay rehetra mitondra amin'ny lalana mankany aminao, izay maneho zavatra tsara amin'ny fiainako.
Mankalazà amin'ny Fanahinao Masina, Tompoko,
tsirairay ny diako, mba ho ohatry ny fonao tsara
ho an'izay rehetra mahita lalana.
ny lelako, ny molotro ary ny feoko,
ka mpiaro ny teninao sy mamita izany izy.
Afafazo eny an-tanako ny ranao masina,
Enga anie ho feno ny fankatoavanao Andriamanitra, mba ho voatahy ny asako.
Enga anie ny hafalianareo manohina ny foko, ary izany dia rojo vy iray ahafantarana ny tenako fa mpanomponao mahatoky aho,
ary amin'izany fomba izany dia ho fitaovana fitaovan'ny fiadananao masina.
Apetrako eo an-tananao ny zava-drehetra atrehako ankehitriny sy izay ho tody aho,
ka mamolavola ahy amin'ny sarinao sy ny tianao ianao,
amin'ny fomba mitovy aminy aminao, ho an'ny olonao,
ary mba hankalazaina amin'ny toerana rehetra alehany io anaranao io.
Izany no anontaniako izany amin'ny anaran'ny Ray, ny zanakalahy sy ny Fanahy Masina.
Ity vavaka fitahiana amin'ny andro ity dia mahafinaritra fotsiny.
La ny fitahian'ny andro dia zavatra tsy maintsy iadiantsika isan'andro. Tsara indrindra, ataovy izany amin'ny maraina mba hisian'ny andro manontolo. Ny olona sasany matetika dia mandrehitra labozia manokana iray mba hanaovana an'io vavaka io, na izany aza, azo atao amin'ny fotoana sy toerana rehetra.
Ny ohatra nasehon'ny vavaky ny Raintsika izay hitantsika ao amin'ny Baiboly dia mampianatra antsika fa tsy maintsy mangataka ny hanina isan'andro isika ary io mofo io koa dia manambara ny fitahiana rehetra azontsika angatahina na ireo tsy haintsika aza izay fantatsika fa fantatry ny Tompo.
3) Vavaky ny fitahian'Andriamanitra
"Misaotra an'Andriamanitra noho ny nanomezany ahy ny tsodrano hanana ny andro iray hafa,
Misaotra anao androany fa afaka mahita indray ny halehiben'ny famoronana sy ny fitiavanao ianao.
Androany, olona sambatra aho
tsara vintana sy mankasitraka ny hanana fotoana vaovao haka andro feno fiadanana,
Ny fitiavana, fiarovana ary ny zava-dehibe indrindra no mpitari-dalana anao.
Tompo ô, omeo hery aho handresena ireo sakana rehetra alehako,
ataovy herim-po sy matanjaka tahaka anao aho,
Ataovy manarona ny fiainako sy ny manodidina ahy rehetra ny fitiavanao ary eny amin'ny alehako.
Ray any an-danitra,
Isaky ny manomboka izany dia mivavaka aho fa hihaino ahy ianao ary hamaly amin'ny halehiben'ny hatsaram-panahy sy ny hatsaram-panahiny lehibe.
Fantatro fa mila anao isan'andro ny fanahiko ary omenao ahy ny fitahiana rehetra.
Amin'ny anaran'i Jesosy,
Ny fahazoana manao vavaka fitahiana avy amin'Andriamanitra sy ny fitahiany ny anaran'Andriamanitra ary ny mangataka azy hitahy antsika dia tokony ho iray amin'ireo dingana raisintsika amin'ny vavaka ataontsika.
Ny fitahian'Andriamanitra dia raisina voalohany amin'ny sehatra ara-panahy ary avy eo ara-batana Izany no fomba tokony hiatrehana ny zavatra tiantsika ho azo ary raha amin'ny ara-panahy ihany no azontsika tratrarina.
4) Vavaka hisaorana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana rehetra
Ny fankasitrahana dia sarobidy izay rehefa mandeha ny fotoana ary toa very ny fiahiahiana ny voaloboka fa ilay tompo tsara amin'ny teniny dia milaza amintsika fa tokony hankasitraka isika.
Misy tantara iray momba ny fahagagana nataon'i Jesosy rehefa nanasitrana boka folo izy dia iray ihany no niverina nisaotra, ny hafa kosa dia nandia fiainana niaraka tamin'ny vatana salama tanteraka, izany dia mampianatra antsika ny fomba tsy tokony hankasitrahana ho tonga izany folo ihany no miverina, izay tokony ho antsika, tadidio foana ny fisaorana an'Andriamanitra noho ireo fitahiana azontsika avy aminy.
Ny fanokafana fotsiny ny masontsika amin'ny andro vaovao, ny fofonahana sy ny fananantsika ny ankohonantsika, dia zavatra kely izay matetika adinontsika matetika ny hisaorana an'Andriamanitra. Andao hianatra hankasitraka sy hanangana vavaka fisaorana isan'andro isan'andro amin'ny fitahiana rehetra voarainay
Tena mahery ve ny vavaka fitahiana ity?
Ny vavaka mahery dia izay atao amin'ny finoana satria io no fepetra takiana amin'ny ny vavaka ataontsika Mba henoina.
Raha mangataka fisalasalana na fitiavan-tena isika, tsy mino fa afaka omen'ny Tompo antsika izay angatahinay, dia vavaka tsy misy fatratra izany ka tsy hahatanteraka ny tanjony. Raha tsy misy finoana dia tsy azo atao ny mampifaly an’Andriamanitra, fampianarana feno baiko izay ao anaty Baiboly izay tokony hotsarovantsika hatrany.
Manana finoana be dia be foana ianao rehefa mivavaka amin'ny andro fitalahana mandritra ny andro amin'Andriamanitra sy hahazoany karazana fitahiana isan-karazany.
Vavaka mahery amin'ny ran'i Kristy